I-CBD kunye neMpilo | Ukhetho lwakho oluBalaseleyo lwezeMpilo kwi2020
I-CBD kunye neMpilo
I-CBD kunye neziBonelelo zezeMpilo
I-CBD kunye neProperties Properties
Iifashoni zalapha zihlala ziphela, kodwa i-CBD ilapha. Ngapha koko, i-cannabis isetyenziselwe amawaka eminyaka kwiinjongo ezahlukeneyo, ngakumbi amayeza. Ukukunika umbono, ukukhankanywa kokuqala kwemihla yokusetyenziswa kwe-cannabis ukusuka kwi-2300 BC, kwincwadi yamaTshayina ebizwa ngokuba nguShu King. Bazisebenzisile ukwenza iintambo kunye nempahla kunye nokunyanga i-rheumatism kunye nentlungu ebuhlungu yokuya exesheni. Ukungafani kwesi sityalo akuyona into entsha.
Nangona kuyacaca ukuba i-CBD okwangoku ihamba ngexesha lobungangamsha obukhulu, sifuna ukucinga ukuba iyenzeka kuba, ekugqibeleni, nasemva kweminyaka emininzi, ulwazi olucacileyo noluchanekileyo malunga neli candelo lezityalo ze-Sativa ze-cannabis luyafumaneka kule mihla. Ukwanda kwezifundo ezincoma kwaye ziqinisekisa izibonelelo zeli candelo, kunye nokupapashwa kwazo, ngokungathandabuzekiyo zincedile ekuqinisekiseni oko abantu abaninzi besele bekrokrela: I-CBD inezibonelelo ezininzi zempilo.
CBD okanye cannabidiol yi-cannabinoid efumaneka kwisityalo se-cannabis. Kwezi-cannabinoids ezingaphezu kwekhulu ezikhoyo kwi i-cannabis Izityalo zeSativa, lelona candelo lifundwayo, elinamandla amakhulu onyango kwaye lelona lifanelekileyo kwinkqubo yethu. Uxanduva lokufunxwa zii-cannabinoid receptors ezifumaneka kwiiseli kuwo wonke umzimba womntu, ngakumbi kwingqondo nakwisistim somzimba. Ukusetyenziswa kwe-CBD kubangela ii-receptors ze-cannabinoid ukuba zisebenze kwaye zibophe ngaphezulu kweeseli, zikhokelela kwinkqubo ye-endocannabinoid esebenzayo kunye esempilweni.
Kwaye, ngoku, uya kuzibuza ukuba yintoni inkqubo ye-endocannabinoid kwaye yenzelwe ntoni? Nangona iyinkqubo entsonkothileyo enomdla, sinokushwankathela ukuba le nkqubo iyabandakanyeka kwiinkqubo ezahlukeneyo zomzimba, ezinje ngokulawulwa kwentlungu, kunye nentliziyo, isisu, kunye nemisebenzi yesibindi, eyenza ukuba i-CBD kunye nempilo unxulumene ngokuqinileyo.
Kodwa ngoku, masithethe ngezinto eziyinyani. Ingandinceda njani i-CBD? Ukusetyenziswa kwamayeza ale nto kuyaziwa ngeendlela ezininzi. Ngokwenzululwazi, kuye kwafunyanwa ukuba kunciphisa kwaye kuthintele ukudumba kunye nesicaphucaphu, isifo seswekile, ukuphuthelwa, uxinzelelo lwasemva kwengozi, isifo sengqondo, isifo samathambo, izifo zentliziyo, i-antipsychotic, i-anxiolytic, kunye ne-analgesic, ngokuchasene nentlungu ye-neuropathic kunye ne-muscle spasms, ngokwesiko Kunzima ngakumbi ukunyanga kunye namanye amayeza, nditsho amayeza. Ikwalunyango olunamandla lwesifo sokuwa, isifo sokuqina kwemithambo, kunye nokulwa ukuphelelwa ngumdla wokutya. Ngapha koko, ngokungafaniyo ne-THC, CBD eninzi ayisiyonto yengqondo esebenzayo, endaweni yoko, ineziphumo zokuthomalalisa kunye nokuthomalalisa. Iyamangalisa yinyani?
Ngoku mhlawumbi ucinga ukuba ungazifumana phi iimveliso zolu hlobo? Kukho iinkampani ezininzi eziye zangena kwi-CBD kodwa zimbalwa ezikwaziyo ukwanelisa amanqanaba amabango abathengi. Ngaphandle kwamathandabuzo, i-Red Emperor CBD yenye yezona zisasazi ze-CBD zinokuthenjwa. Inkampani encinci eneemveliso ezingaphezulu kokulindelweyo kuye nabani na owaziyo ukwahlula phakathi komgangatho ophakathi kunye nomgangatho ophezulu weemveliso. Zombini kwincasa nakwivumba lamagqabi ayo omeleleyo, unokuluxabisa ukhathalelo lwe-hemp yezolimo, ibekwe esweni ngokupheleleyo kwaye apho iimeko ezifanelekileyo zenziwe ukuze zifumane imveliso yeprimiyamu. Ngaphantsi kwe-0.3% ye-THC kuzo zonke iintlobo zayo, zonke iimveliso ze-Red Emperor ze-CBD zivela kulimo lwe-hemp yezolimo.
Ioyile ye-CBD evela kwi-Red Emperor CBD inokuba sisisombululo esifanelekileyo kuwe. Ukusetyenziswa kolwimi olunye, le oyile epheleleyo inokukunceda ulale kwaye, ngenxa yoko, ukonwabele ukuphumla ngakumbi, kunzima ukufezekisa ngokwamanqanaba oxinzelelo okanye ukukhathazeka. Kukwasebenza kakhulu ngokuchasene nentlungu kwaye kunokuba yenye indlela yokunciphisa iintlungu. Phakathi kwezicelo zayo eziqinisekisiweyo, ezibekwe esweni yingcali kunye nakwidosi ethile, kubonisiwe ukuphucula umgangatho wobomi babantu abaphethwe yiParkinson's kunye nokuxhuzula.
Njengoko ubona, akukho mfuneko yokuba ubhenele kwikhoboka leziyobisi elinemiphumela emibi. Ungazama i-CBD kwaye impilo yakho ngokuqinisekileyo iya kuphucuka. Indalo inobulumko kwaye isinika yonke into esiyifunayo kwimpilo yethu nakwintlalo-ntle yethu, kutheni ungazisebenzisi nje?
egqithileyongeposi Previous:Yintoni ioyile ye-CBD? | Eyona mveliso ilungileyo yango-2021Okulandelayoelilandelayo:Ukunyamekelwa kolusu lwe-CBD kunye noSam Cheow, owayesakuba nguLaurel Makeup VP